Posted by မန်းကိုကို | 09/09/2010, 03:19
These are all second-hand ideas, Ko Mahn Ko. Nothing original..
Posted by zizawa | 09/09/2010, 08:16
ဟုတ်ပါတယ်ဆရာရယ်၊ မူရင်းဆိုရင်တော့ ခုလောက်ဆိုဆရာလည်း ဘလော့တောင်မရေးနိုင်ပဲ လက်ချာ၊ ကွန်ဖရင့်၊ စင်မီနာတွေနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလည်ပြီး ခြေကြွခကို ယူရိုပြေးဝယ်ရတာနဲ့ ရွှေချောင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းရတာနဲ့ ဒီကပုရွက်ဆိတ်ကိုကို တို့ကို လှည့်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 🙂
Posted by မန်းကိုကို | 19/09/2010, 05:53
If you readers are interested in the ideas on society and politics, pls check out http://www.bbc.co.uk/radio4. Select the programme called ‘In Our Time’ by Melvyn Bragg. All of R4 programmes are brilliant. And the good thing is you can listen round the clock. If you miss the programme you like, then you can come back and listen with BBC i-player.
Posted by watote | 09/09/2010, 09:03
The plan to burn Koran has beenabig news!
Posted by Nanda | 09/09/2010, 17:21
မြန်မာလိုလေး ပြန်ရှင်းထားတာ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းတင်ပါ။ ပို့စ်တွေ သိပ်စိတ်တော့ လိုက်ဖတ်ရတာ မောနေပြီ။ 🙂
Posted by pandora | 10/09/2010, 09:11
ကျွန်တော်လည်း စမိတဲ့ အလုပ်တခုကို ပီးအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။ ဖတ်တဲ့လူရှိတာသိရတာကတော့ အားရှိတာပေါ့။ 😀
Posted by zizawa | 10/09/2010, 19:31
မပန်တို့လို အချိန်ရှားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ပို့စ်တွေ စိပ်တယ်လို့ ထင်မှာ။ ကျမတို့လို အချိန်ပိုလို့ တနေ့ ၂နာရီ ၃နာရီ ဖတ်နေတဲ့သူတွေကျတော့ တော်တော်ကြီး စောင့်ရပါလားလို့ ထင်တာ…။ အချိန်ဆိုတာလဲ relative object ပဲနော် ……
Posted by မိုးစက်ပွင့် | 11/09/2010, 11:30
ပို့စ်အများကြီးကို တထိုင်တည်းဖတ်သွားပါတယ်၊ နက်နက်နဲနဲ ရေးထားတာတွေကိုတော့ မမှီပါဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတရပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဇီဇဝါ။
Posted by TZA | 19/09/2010, 10:56
တလောကပဲ ဗမာပြည်မှာ မိုးပြာဂိုဏ်းကို မတရားအသင်းအဖြစ်ကြေညာတယ်။ အဲ့ဒီ ကိုယ်တော်ကိုလည်း ဖမ်းပြီးထောင်ချထားတယ်ကြားတယ်။ ပညာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ဘယ်သူမှ ကန့်ကွယ်တာမကြားမိဘူး။ အလယ်ခေတ် အတွေးအခေါ်ကနေ မတိုးတက်သေးတာ စိတ်ပျက်စရာပဲ။
Posted by Arkar Kyaw | 12/12/2011, 14:52